चार महानगरको मत परिणामः कहाँ को अगाडि ? | KTM Khabar
चार महानगरको मत परिणामः कहाँ को अगाडि ?
२०७४ जेष्ठ ४ गते १०:४४ मा प्रकाशित
४ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार बिहान ९ बजेसम्मको मत परिणाम अनुसार चार महानगरपालिकामध्ये तीनवटामा एमालेले अग्रता कायम राखेको छ । काठमाडौं, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकामा एमाले अघि छ भने ललितपुर महानगरपालिमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायम राखेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले ४ हजार ३१७ मत पाएका छन् । कांग्रेसका उम्मेदवार राजुराज जोशीको मत २ हजार ४७२ छ । विवेकशिल नेपालीकी रन्जु दर्शनाको मत १ हजार ८७७ र साझा पार्टीका किशोर थापाको १ हजार २२६ मत पाएका छन् । माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार सर्वोत्तम डंगोलको मत भने ४९४ छ ।
ललितपुरमा आधिकारिक रुपमा मत परिणाम सार्बजनिक गरिएको छैन । कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जन र एमालेका हरिकृष्ण व्यन्जनकारबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । महर्जनको ९ हजार ४३२ र व्यन्जनकारको ९ हजार २७८ मत छ । माओवादीका दिनेश महर्जनले १ हजार ३५२ मत पाएका छन् ।
यसैगरी पोखरा महानगरपालिकामा एमालेका मानबहादुर जिसीले ९ हजार ३१७ मत छ । कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट मेयर उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका रामजी कुँवरले ८ हजार ९३१ मत पाएका छन् ।
सबैको चासोको केन्द्र बनेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेका देबि ज्ञवालीले अग्रता कायम राखेका छन् । माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालभन्दा ज्ञवाली २ हजार बढी मतअन्तरले अगाडि छन् । ज्ञवालीको ६ हजार ७३५ र दाहालको ४ हजार ९८७ मत छ ।